5 qof Soomaali ah oo ku dhimatay Dab xooggan oo ka kacay dhisme ku yaalla dalka Mareykanka | HalQaran.com
Home Wararka Maanta 5 qof Soomaali ah oo ku dhimatay Dab xooggan oo ka kacay...
5 qof Soomaali ah oo ku dhimatay Dab xooggan oo ka kacay dhisme ku yaalla dalka Mareykanka
Minnesota (Halqaran.com) – Dad Soomaali ah ayaa ku geeriyooday dab ka kacay dhisme dabaq ah oo ay wax ka daganaayeen dalka Mareykanka.
Inta la xaqiijiyey illaa Shan qof ayaa ku geeriyootay afar kalana waa ay ku dhaawacmeen kaddib markii uu dab ka kacay guri ku yaalla xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka mareykanka.
Dabka ayaa waxaa uu ka bilowday dabaqa 14aad ee Dhismaha uu dabka ka kacay oo ka kooban 25 Biyaano, waxaana Shanta Ruux ee geeriyootay Afar ka mid ah ay ahaayeen Soomaali dhismahaasi ku noolaa.
Qaar ka mid ah dadka Soomaalida oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay dadka dhintay inay u geeriyoodeen naqaska oo ku dhagay, maadaama qiiqa uu sababay inuu naqaska ku dhago.
Booliska iyo gaadiidka dab-damiska oo goobta tagay ayaa ku guulaystay soo badbaadinta dadkii kale ee dhismaha dabaqa daganaay, kuwaasi oo qaarkood isbitaalka la geeyay.
Dhismaha dabaqaan ayaa waxaa ku nool inta badan dadka da‘da ah ee waayeelka ah.
Soomaali ku dhimatay dab ka kacay dhisme ku yaalla Minnesota